प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच चर्काचर्की, किन स्विकारेनन् स्वास्थ्यलाभको कामना ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच चर्काचर्की, किन स्विकारेनन् स्वास्थ्यलाभको कामना ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठक ‘अप्रिय’ बन्यो । बैठकमा ठोस एजेन्डाबारे छलफल भएन । पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको चर्काचर्कीका कारण अरू विषयले प्रवेश नै पाउन सकेन ।
सहभागी एक नेताका अनुसार संवाद यतिसम्म ‘तल’ पुग्यो कि नेता नेपालले ‘स्वास्थ्यलाभको कामना छ’ भन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंको स्वास्थ्यलाभको कामना चाहिएन’ भन्दै अस्वीकार गरे ।
पार्टीका गत शुक्रबार र आइतबारको बैठकका निर्णयलाई लिएर नेता नेपालले सातबुँदे लिखित असहमति राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा त्यही लिखित असहमति र त्यसपछि नेताहरूबीच उत्पन्न तरंगले प्रवेश पायो । नेता नेपालले आफूमाथि लाञ्छित गर्दै फेसबुकमा लेख्ने सांसद तथा हालै प्रेस संगठनको इन्चार्ज घोषणा गरिएका नेता राजेन्द्र गौतमको प्रसंग झिके ।
उनले ‘जे पायो त्यही लेखेको’ भन्दै गौतमलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यो कुरा ओलीलाई चित्त बुझेन । ओलीले नेपाललाई ‘तपाईंले पनि बुधबार पत्रिकालाई प्रयोग गरेर के–के लेखाउनुभएछ’ भन्दै सातबुँदे असहमतिपत्रमा आपत्ति जनाए । ‘तपाईँचाहि जे पायो त्यही कुरा पत्रिकामा छपाउँदै हिँड्न मिल्ने, अनि अरूले चाहिँ केही लेखे भनेर कारबाही गर्नुपर्ने ?’ भन्दै उल्टै नेपालमाथि ओली खनिए । त्यसपछि माहौल तात्दै गयो । यो समाचार आजकोकान्तिपुर दैनिकमा छ ।
यो पनि पढ्नुस – विराटनगरबाट ४१ किलोमिटरको दूरीमा रहेको धरानस्थित पिण्डेश्वर धाम पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ ।पिण्डेश्वर धाममा पूजापाठ गर्न र घुम्न आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पिण्डेश्वर महादेवको मन्दिर धरान उपमहानगरपालिका–१४ विजयपुरमा अवस्थित छ । यहाँको प्राकृतिक वातावरणले पर्यटकलाई आनन्दित तुल्याउने गरेको छ । पिण्डेश्वरमा अरु बेलाभन्दा साउनमा अत्यधिक भीड लाग्ने गरेको छ । भक्तजनले यहाँ पूजापाठसँगै जल चढाउने गरेका छन् ।
उक्त मन्दिर गुठी संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित रहेको मन्दिरका पुजारी विनोद पोखरेलले बताउनुभयो ।पिण्डेश्वर मन्दिरको महिमा नेपालका अन्य शिव मन्दिरहरुकाे तुलना फरक र महत्वपूर्ण छ । हरेक मन्दिरको आफ्नै विशेषता र महत्व हुने गर्दछ । मध्यकालिन कला कैशलको नमुना देख्न सकिने धरानको विजयपुरमा अवस्थित पिण्डेश्वर बाबा धामको पनि आफ्नै किसिमको विशेषता र महत्व छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष (बर्ष भरिमा) करिव ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा भक्तजनहरु श्रद्धा पूर्वक भक्ती भावले पुजा आरधना गर्न आउछन् । जस मध्य करिव ५ लाखको हारहारीमा श्रावण महिनामा शिवलाई जल चढाउन आउने गर्दछन् ।
स्कन्दपुराणको हिमवत्खण्ड अन्तरगत रुद्राक्षण माहात्म्यले पिण्डेश्वर बाबा धामको उत्पतिको बारेमा वर्णन गरेको छ । पिण्डेश्वर परिसरलाई रुद्राक्षका वनको रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै समुन्द्र मंथन गर्ने क्रममा विभिन्न बस्तुहरु निस्किए, साथै अमृत पनि ति बस्तुहरुलाई छानेर अमृत निकाली सकेपछि बाँकी रहेका बिकार यूक्त बस्तु अथवा छोक्राको पिण्ड बनाई यस स्थानमा देवताहरुले पुजा गर्ने गरेको बताइएको छ । संसारको जुनकुनै कुनामा यदि रुद्राक्षको माला फल प्राप्ती गर्ने उदेश्यले लगाइन्छ भने उक्त रुद्राक्षकोमाला पिण्डेश्वर बाबा धाममा ल्याई विधिवतरुपमा मन्त्र उच्चारण गरिनु पर्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
उहाँ यहाँ गाईको दूध चढाउन आउनुहुन्छ । “पहिलाभन्दा मन्दिर वरपर फोहर बढेको छ, शौचालय व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन््”, चौधरीले भन्नुभयो । यस्तै विराटनगरबाट पूजा गर्न आउनुभएकी गीता कार्की आफ्नो लागि साउन महीना खास रहेको बताउनुहुन्छ ।साउनमै आफूलाई छोरी प्राप्ति भएकाले पिण्डेश्वर धाम आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । साउनमा माछा मासु नखाई भक्तजन पिण्डेश्वरमा पूजापाठ गर्न आउने गरेका छन् ।सुनसरीको खनारका दीपक थापा बेलाबेलामा परिवार र साथीभाइसँग पिण्डेश्वर आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले यहाँ घुम्न आउनेका लागि पानी र शौचालयको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्दिरमा भेटिनुभएकी विराटनगरकी सुष्मा पराजुली बर्सेनी पिण्डेश्वर धाममा आउने गरेको बताउनुहुन्छ । “यहाँको दर्शन गर्दा मन आनन्दित हुन्छ, इच्छयाएको कुरा प्राप्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्दिर छेउमै ‘सरस्वती स्वभर पोखरी’ रहेको छ । सो क्षेत्रको संरक्षण भने हुन सकेको छैन ।
नेपालमा आज थपिएका कोरोनाका २७८ नयाँ संक्रमित यी जिल्लाका ! प्रसासनले लगायो अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा !
घरबेटीले कोठामा छिर्न नदिएपछि प्लाष्टिक ओढेर पिसिआर परीक्षण गर्न लाइनमा